Nigeria: Gabdhaha ma siisaneyno maxaabiis - BBC News Somali
Image caption Madaxweynaha Nigeria, Goodluck Jonathan
Madaxweynaha Nigeria ayaa meesha ka saaray in dowladdiisu ay maxaabiis ku bedelaneyso gabdhaha labada boqol ka badan ee u afduuban kooxda Boko Xaram.
Go'aanka madaxweyne Goodluck Jonathan ayaa waxaa shaaciyay wasiirka Britain u qaabilsan arrimaha Africa, Mark Simmonds, oo ay shalay kulmeen.
Dowladda Nigeria ayaa horray u sheegtay in ay diyaar u tahay wadahadal ay la yeelato kooxda Boko Xaram, balse waxaa hadda muuqata in uu jiro xariiq cas oo aysan dowladda dhaafi doonin.
Sida uu sheegay wasiirka Britain u qaabilsan arrimaha Afrika, Mark Simmonds, oo booqasho ku jooga Nigeria, madaxweyne Jonathan ayaa u xaqiijiyay in aanay maxaabiis Boko Xaram ah sii deyn doonin si gabdhaha ay xoriyadooda u helaan.
Hasayeeshee dalabka ugu weyn ee hoggaamiyaha kooxda Boko Xaram, Abubakar Shekau, ayaa ah in maxaabiista ay dowladda ka hayso la sii daayo, si gabdhaha ay u fasaxaan, mana cadda haddii taasi dhici waydo waxa ay dowladda kala hadli doonaan.
Mark Simmonds, ayaa sheegay in marka ay xaalladan dhammaato, loo baahan yahay in sharciga lala tiigsado kooxdan afduubka gabdhaha geysatay.
Go’aankan cusub ee dowladda Nigeria ayaa adkeyn doona wadahadal ay la yeelato kooxda Boko Xaram.
Sanad ayaa ka soo wareegay xaaladda deg degga ee Nigeria
Isra'iil oo ku biirtay baadigoobta gabdhaha